Deeqbixiyaasha farshaxanka ee McKnight Arts oo sida caadiga ah dalban lahaa dib u cusboonaysiinta deeqdooda 2020 waxay heli doonaan kordhinta deeqda iyadoo ay ugu wacan tahay COVID-19. Hay'adahan waxay ka heli doonaan ogeysiis emayl ah oo ku saabsan kordhinta kooxda farshaxanka. Wax talaabo ah loogagama baahna deeq bixiyayaashan.
Hay'adaha cusub, mashaariicda, ama barnaamijyada aan hadda haysan deeqaha barnaamijka 'Arts Arts McKnight' waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay codsadaan wareegtadeena weydiinta bilowga ah ee Oktoobar, Oktoobar 1 - 15. Fadlan la xiriir sarkaalkaaga barnaamijka ama Renee Richie, barnaamijka ku meel gaarka ah iyo barnaamijyada deeqaha,rrichie@mcknight.org), su'aalo.
Waayo farshaxanada shakhsiga ah, wax badan ka baro arinta McKnight Artist Fellowships, Golaha Degaannada Gobolka, iyo saadaalinta deeqaha farshaxanka ee dadweynaha.
Ururada farshaxanka, talaabada ugu horeysa waa inaad barato qaabkayaga. Waxaad sidoo kale rabi kartaa inaad dib u eegto annaga maalgelinta FAQ iyo ururada farshaxanka ee noo keydka macluumaadka.
Haddii, ka dib markaan akhrino boggeena internetka, waxaad dareemeysaa in ururkaagu uu ku haboon yahay istiraatiijiyadayada maalgalinta, la soo xiriir Kooxda farshaxanka kahor bilaabista arjiga.
Si laguu caawiyo diyaarinta, waxaad horay u arki kartaa baadhitaan bilowga ah iyo codsi buuxa oo buuxa foomamka wakhti kasta.
Waxaanu ka jawaabi doonaa email illaa afar illaa lix usbuuc ka dib markaad heshid su'aalahaaga, ama inaad hoos u dhigto maalgelinta ama inaad bixiso tilmaamo si aad u soo gudbiso dalabka buuxa ee internetka.
U qalmida iyo Noocyada Taageerada
Waxaan bixinnaa deeq-bixinno iyo mashruucyo deeq-bixiyaasha oo ku yaalla Minnesota. Waxaanu tixgelineynaa deeqaha raasumaalka kaliya xaaladaha aan caadiga ahayn. Iyadoo ay jiraan waxyaabo yar oo ka reeban, codsadayaashu waa inay ka soocaan Adeegga Canshuuraha Gudaha sida canshuur-bixinta, hay'adaha aan macaash doonka ahayn ee u qalma deeqda.
Hay'adaha dawladdu waxay codsan karaan maalgelinta mashruucyo casri ah. Hase yeeshe, guud ahaan ma jirno maalgalin, si kastaba ha ahaatee, waxqabadyo ah dhaqan ahaan waa mas'uuliyadda kaliya ee dawladda.
Aasaasiyeyaashu waxay noqon karaan kuwa ugu waxtar badan adoo xoogga saaraya khayraadkooda meelo yar. Tani waxay ka dhigan tahay inaanaan taageeri karno mashaariic qiimo leh oo ka baxsan danaha barnaamijkeena. Tusaale ahaan, guud ahaan ma sameyn karno deeqaha ururada leh astaamahan:
ha bixinin shaqaalahooda farshaxanka
waa taariikh taariikhi ah
Isticmaal farshaxanka ugu muhiimsan ee baxnaaninta ama daaweynta
ugu horreyn halkan waa inaad soo bandhigtaa farshaxanka
waxay soo bandhigeen farshaxan muddo ka yar laba sano
ugu horreyntii waxay u adeegtaa dhalinyarada, ama asaas ahaan waxbarashada fanka ama adeegga bulshada ee ku saleysan
waxay leeyihiin miisaaniyad hawlgal oo ka yar $ 100,000
Intaas waxaa dheer, guud ahaan maahan lacagahan soo socda:
wax soo saarka guurka, dhacdooyinka, bandhigyada, ama dabbaaldegyada
deeq waxbarasho ama kaalmo toos ah oo loogu talagalay shakhsiyaadka
shirarka, oo ay ka midka yihiin soo xaadiridda ama safarka (marka laga reebo marka la xidhiidha taageerada McKnight ee jira)
dhicin, marka laga reebo xaalado dhif ah
waxqabadyo leh ujeedo diineed gaar ah
ku-meel-gaadh ah oo ay mamnuuc tahay Xeerka Dakhliga Gudaha
Qoraal ku saabsan ku lug lahaanshaha iyo falanqeynta siyaasadda guud:
Foundation wuxuu tixgelin karaa maalgelinta codsiyada dadaalka sida u doodista. Hase-yeeshee, sida uu dhigayo Xeerka Dakhliga Gudaha (Internal Revenue Code), si kastaba ha ahaatee, Hay'addu maaha inay maal-galiso isku-dayga wax-ku-oolka ah ee sharci-dejinta gaarka ah ama kuwa la soo jeediyay, oo ay ku jiraan aftida, sharciyada degaanka, iyo qaraarada.
Wax badan ka ogow guudkeena maalgelinta tilmaamaha.
McKnight waa markii ugu dambeysay ee la weydiisto muddooyinka loo qabtay. Haddii lagu casuumay, taariikhda soo gudbinta su'aalaha ayaa go'aamin doona marka soo-jeedin buuxda ay tixgeliso gudigeena. Fadlan ogow nidaamka codsiyada internetka wuxuu furan yahay qiyaastii laba asbuuc ka hor taariikhda kama dambaysta ah sidaa darteed taariikhaha furan ee hoos ku qoran waxay ku kala duwanaan karaan sanadka illaa sanadka.
Codsiga wuxuu furan yahay
Arjiga bilowga ah
Janaayo 2 Janaayo 15 Laga yaabaa
Abriil 1 Abriil 15 Ogosto
Julaay 1 Julaay 15 November
Oktoobar 1 Oktoobar 15 Febraayo
Dhamaan macluumaadka cusub ee bilowga ah waa inay isticmaalaan "Bilawga Codsiga" badhanka bogga sare. Waxqabadyada la socda ayaa laga heli karaa xisaabtaada internetka.
Si aad u hesho codsiyada badbaadsan ama hubinta xaaladda warbixinta, isticmaal Gelitaanka Account link (geeska sare ee bog kasta ee boggan).
Haddii aad dhibaato ku qabto nidaamka codsiyada internetka nala soo wac (612) 333-4220 ama dir email kooxdayada Farshaxanka.
Tilmaamaha Talo-bixinta hore
Nidaamka codsiga internetka ayaa la heli karaa oo kaliya laba toddobaad ka hor wakhtiga kama dambaysta ah.
Waqtiga Ugu Dheereya ee Codsiyada